Atụmatụ Pụrụ Iche nke E-commerce Technology | ECommerce ozi ọma
Uniquedị pụrụ iche nke ndị a teknụzụ azụmahịa ịntanetị, ekwuola na ọtụtụ ohere ndị ọzọ dị maka azụmahịa na ọrịre, ebe enwere ozi mmekọrịta mmekọrịta dị iche iche nke ahaziri iche.
Mara njirimara nke azụmahịa eCommerce nke na-eme ka ọ bụrụ usoro pụrụ iche nke na-agbasawanye mgbe niile n'ihi nnabata dị mma nke ọha na eze nabatara ya.
1 Kedu ihe kpatara azụmahịa electronic (ma ọ bụ eCommerce) ji dị oke mkpa taa
2 Njirimara nke teknụzụ eCommerce
2.1 Ogologo ụwa
2.4 Kpụrụ zuru ụwa ọnụ
2.5 Nhazi na mmegharị
2.6 Nkà na ụzụ mmadụ
2.7 Njupụta ozi
2.8 Akụ na ụba
Kedu ihe kpatara azụmahịa electronic (ma ọ bụ eCommerce) ji dị oke mkpa taa
Ebe ọ bụ na e kere ụlọ ahịa ntanetị mbụ wee ruo taa bụ ahịa eCommerce, ọtụtụ afọ agafeela. Na mgbanwe dị ezigbo mma, na-enwe nnukwu ọganiihu. Ma ọ bụ na ọtụtụ mmadụ, kama ịtọlite ​​ụlọ ahịa anụ ahụ, họrọ otu na thanksntanetị n'ihi uru ọ nwere: inwe ike iru ndị na-ege ntị ka ukwuu, ịbụ ebe ndị ọrụ na-eme nyocha ha, wdg.
Ọtụtụ nde ndị ọchụnta ego emechaala nọrọ na thentanetị Nke ahụ enyela gị ohere ugbu a ị nwere ike ịchọta site na igwe nchọta niile ngwaahịa ịchọrọ, ọbụlagodi ndị ị na-amaghị nwere ike ịdị.
Agbanyeghị, enwere ike iji teknụzụ eCommerce nwee ọtụtụ ihe iji tinye n'uche. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae? Anyị ga-agwa gị mgbe ahụ.
Njirimara nke teknụzụ eCommerce
Ọ bụrụ na i nweela ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, maọbụ ọ bụrụ na ị na-atụle ịmepụta otu, njirimara ndị a nwere ike inyere gị aka ịghọta ezigbo mkpa e-commerce dị. N'ezie, ọ bụghị naanị na ọ ga-adị mkpa ugbu a, kama ọ bụ ọdịnihu nke ụwa, nwere naanị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ụlọ ahịa anụ ahụ pere mpe (ị nwere ike ịmara na ugbu a ụlọ ahịa anụ ahụ pere mpe na-emepe emepe mana azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị na-abawanye). N'echiche a, njirimara ndị na-akọwa ya bụ ihe ndị a:
Karịsịa enwere uru a nke na - enyere aka ijikọ ụwa niile ka azụmahịa azụmaahịa nwee ike ịkarị oke ala na ọdịbendị na arụmọrụ dị ukwuu ma na-akwụ ụgwọ yana na mgbalị ma e jiri ya tụnyere azụmahịa azụmaahịa. N'ihi nke a, ikike ndị ahịa a ga-abawanye.
Ya na ọnọdụ, nke zuru ụwa ọnụ bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke teknụzụ eCommerce. Ma nke ahụ bụ inwe ike ịrụ ọrụ n'ụwa niile, Na ụdị ịkwụ ụgwọ dị iche iche (Paypal, nnyefe ụlọ akụ, nyiwe ịkwụ ụgwọ, kaadị akwụmụgwọ, wdg) ọ na-enye gị ohere ịme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịzụta n'aka gị.
Ọ bụrụ na anyị gbakwunye na nke ahụ, enwere ike izipu ngwaahịa ndị ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị Correos dị, enwere ọtụtụ nhọrọ ugbu a, yana ụlọ ọrụ ndị na-ebugharị ozi, nke na-eme ka ebufe ngwa ngwa na nchekwa, nke na-enye onyinyo ka mma maka azụmahịa gị
Na azụmaahịa ọdịnala, ezigbo ahịa bụ ebe anụ ahụ a na-eleta iji mee azụmahịa. N'aka nke ọzọ, na eCommerce enwere ebe niile, nke pụtara na ọ dị ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla. Site na nke a, a na-ahapụ ahịa ahụ ebe ọ bụ na ekwesighi igbochi ya na njedebe oke ma na-enye ohere ịzụrụ site na nkasi obi nke ụlọ.
Yabụ, ị ga-enwe azụmahịa na Ọ bụghị naanị ebe usoro ka a na-eme ya, ma ị ga-enwe ike ijere mba ahụ dum, ma-ọbụ ọbụna ụwa dum ozi ma ị chọọ. Iji maa atụ, were ya na ị nwere azụmahịa nke ngwa mma.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa anụ ahụ, ihe dị mma bụ na ị na-ere naanị n'obodo ebe ị nọ, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ha maara gị. Agbanyeghị, site na iji eCommerce, ị na-emepe ebe ahụ karịa, ebe ọ bụ na ngwaahịa ndị ị na-ere nwere ike izipu site na mail ma ọ bụ ndị ozi gaa n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ, ma ọ bụ ụwa niile, nke na-emepe ndị na-ege gị ntị karịa, ị ga-enweta ọtụtụ uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na azụmaahịa ị nwere dị mma.
N'adịghị ka azụmahịa ọdịnala, nkwukọrịta ụzọ abụọ n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-adị mfe. Nke a pụtara na ọrụ ndị a niile ga-ekwe omume naanị otu weebụsaịtị. Site na inwe mmekorita mmekorita, enwere otutu nkwa site n'aka onye ahia na onye ahia.
Tọọ nkwurịta okwu site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị mfe. Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị na enwere nkata, mana nhụsianya nke netwọkụ mmekọrịta meghere ọwa nkwukọrịta ọzọ yana ekwentị na email. Ihe a niile na-enye ohere maka mmekọrịta chiri anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ azụmahịa mpaghara na-agwa ndị ahịa ya okwu (ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ, ha anaghị ahụ ibe ha ihu na ihu).
Kpụrụ zuru ụwa ọnụ
Njirimara a magburu onwe ya ebe ọ bụ na ụkpụrụ teknụzụ dị mfe iji jikọta iji mezuo ha ka mba niile gburugburu ụwa ga-ekerịta ha. Na nke a, a na-agbaji ọtụtụ ihe mgbochi ma ọ bụ erughị eru, na-eme ka ngwaahịa ndị tozuru etozu iji zere nsogbu.
N'echiche a, anyị na-ezo aka na nke ahụ eCommerce niile na-arụ ọrụ n'otu ụzọ, ya mere ọ dị mfe iji tulee ọnụahịa, nkọwa ngwaahịa, oge nnyefe, wdg. nke na-eme ka nzụta ndị ọrụ ahụ.
Nhazi na mmegharị
N'okwu a, yana otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ugbu a na ọdịnihu, bụ ịhazi onwe na ịmegharị, ya bụ, azụmahịa kọmputa nwere ike - imeghari dabere na onye ọrụ ma ọ bụ mmasị ndị ahịa, ma ọ bụ site na ịnye ngwaahịa ndị metụtara ya, na-eme ka ha dịkwuo nkọwa dịka mkpa, na-agbanwe ihe ndozi, na-enye Kupọns ...
Na nkenke, ikike ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ịgbanwe dabere na ihe ndị ahịa ha na-achọ n'aka ha.
Nkà na ụzụ mmadụ
Storelọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ndị na-elekọta mmadụ karịa ndị ọzọ, dị ka telivishọn, redio ... N'ihi na n'ọnọdụ a enwere mmekọrịta ka ukwuu, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na ụlọ ahịa ahụ n'onwe ya nwere ike bụrụ onye mepụtara ọdịnaya nke gị nke na-agwa ndị ọrụ gị maka ngwaahịa ndị a ma ọ bụ isiokwu nke ndị a. Ya mere, oriri nke ọdịnaya dịkwa mkpa dị ka njirimara eCommerce.
N'okwu a, anyị na-ezo aka na ego nke ozi, site na eCommerce, ma ọ bụ Intanet, enwere ike inweta banyere ụfọdụ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị attentionaa ntị, ihe niile eCommerce nwere otu ngwaahịa na-ere ha na otu nkọwa. Ma e nwere ndị ọzọ na-egositụ mmasị n’ihe gbasara ozi ha na-enye ndị ọzọ, nke ka elu ma baa uru. Nke a na-enye ohere maka njikọ dị mma na ndị ọrụ, yana ịme mkpebi kwesịrị ekwesị.
Agbanyeghị, inye nkọwa dị ogologo ma na-agwụ ike abụghị ezigbo echiche mgbe niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha amachaghị ihe ma ọ bụ sie ike nghọta. Ọ bụ ya mere o ji chọọ ndị nwere ike ịnabata ozi niile ma nye ha ederede ga-ekwe nghọta ma bụrụkwa ihe bara uru iji mee mkpebi.
N'okwu a anyị anaghị ekwu maka ego ejiri arụ ọrụ eCommerce, kama ọ bụ akụnụba nke ngwaahịa a. Ma ọ bụ na, otu nnukwu ọghọm nke eCommerce bụ n'eziokwu na onye na-azụ ahịa enweghị ike ịhụ ngwaahịa ahụ, ma ọ bụ metụ ya aka ma ọ bụ nwaa ya tupu ịzụta ya, ọ bụ ya mere ọtụtụ ji ahọrọ ụlọ ahịa anụ ahụ karịa ndị dị n'ịntanetị.
Nsogbu bụ na ugbu a, site n'ịgbanwe na ikwe ka nlọghachi, mgbanwe ..., n'ọtụtụ ọnọdụ na enweghị ajọ mbunobi nke onye ọrụ, ọ ga-emepe ohere ịme "nnwale", ya bụ, inwe ike nyere aka ịhọrọ ngwaahịa ndị ahụ ọbụlagodi na ha ahụbeghị ha mbụ.
Oleekwa otú e si eme ya? Ọfọn, ye uwak etop oro afo oyomde ndinọ. Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị ederede ka enwere ike iji, kamakwa ihe onyonyo na vidiyo iji mee ka ndị ahịa kwenye na ngwaahịa a bụ n'ezie ihe ha chọrọ ma na-achọ idozi nsogbu ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ihe di iche iche nke E-commerce Technology
ANGLE GUTIERREZ GERARDO dijo
Ọ baara m uru maka ajụjụ metụtara iwu kọmputa
Zaghachi na ANGULO GUTIERREZ GERARDO
5 Ngwaahịa Ecommerce ohuru ohuru I Kwesiri